Suppository and Children - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အခုဆိုမိုးတှငျးရောကျလို့ ကလေးငယျတှအေဖြားအနာမြားလာကွပွီဖွဈပါတယျ။ ဒီအခါမှာ ကလေးတှကေို ဆေးခနျးပွသူပွ၊ အိမျမှာပဲကုသူကုနဲ့ ပါရာစီတမောကိုရှေးခယျြတိုကျကွတဲ့သူတှကေအမြားဆုံးပါပဲ။ ပါရာစီတမောကို ပါးစပျကနေ အရညျအခဲနဲ့တိုကျကွတဲ့အပွငျ ကလေးရဲ့စအိုဝမှတဆငျ့ ဂွိုလျတုတောငျ့ထညျ့ပွီးအဖြားသကျသာအောငျလညျး လုပျကွပါတယျ။ ဒီနရောမှာ ပါးစပျမှတိုကျကြှေးခွငျးနဲ့ စအိုဝမှဂွိုလျတုထညျ့ခွငျး ဘယျအရာကပိုကောငျးသလဲ နှိုငျးယှဉျကွညျ့ကွရအောငျနျော။
လူအမြားစုထငျထားကွမှာကတော့ စအိုမှ ပါရာစီတမောဂွိုလျတုတောငျ့ထညျ့ခွငျးဟာ ပါးစပျမှတိုကျခွငျးထကျပိုစှမျးတယျ၊ အဖြားမွနျမွနျကတြယျလို့မှတျယူနကွေပါတယျ။ ဒါဟာ အမှနျတကယျဟုတျမဟုတျကို အစ်စရေးနိုငျငံ ဟယျမတျဆေးပညာဌာနမှ ဒေါကျတာဂိုးစတိနျးဦးဆောငျတဲ့အဖှဲ့က သုတသေနပွုလုပျလိုကျတဲ့အခါ ပါးစပျမှ ပါရာစီတမောတိုကျကြှေးခွငျးနဲ့ စအိုမှပါရာဂွိုလျတုတောငျ့ထညျ့ခွငျးဟာ အဖြားကစြတေဲ့ အစှမျးသတ်တိရော၊ အဖြားကခြိနျရောမှာ အတူတူပဲဖွဈပါတယျဆိုတဲ့ အဖွထှေကျရှိလာပါတယျ။
ဒါဆိုဂွိုလျတုထညျ့တာဟာ ပါးစပျမှတိုကျတာနဲ့အတူတူပဲလား? ဘာတှပေိုကောငျးလဲ။ ဘာတှဆေိုးကြိုးရှိမလဲ?
ပါရာဂွိုလျတုတောငျ့ကို ကလေးမြားဆေးတိုကျရခကျခဲတဲ့အခါမှာ ဆေးအခြိနျအဆမမှနျခွငျးဖွဈသှားမှာစိုးတဲ့အတှကျအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အရမျးအနျနတေဲ့ကလေးငယျတှပေါးစပျကနဆေေးတိုကျလို့မဝငျတဲ့အခါ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ သူ့ရဲ့ဆိုးကြိုးအနနေဲ့ကတော့ ပါးစပျကတိုကျခွငျးထကျ ကလေးငယျမြားခံရနညျးနညျးခကျပါမယျ။ ရုနျးကနျငိုယိုနနေိုငျပါတယျ။ အဖြားကဆြငျးစနေိုငျခွငျးအစှမျးက အတူတူပဲဖွဈတဲ့အတှကျ ကလေးငယျရဲ့အခွအေနပေျေါမူတညျပွီး အဆငျပွရောလမျးကွောငျးကနသော ပါရာစီတမောကိုပေးဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
ဒီနရောမှာ ဖွညျ့စှကျပွီးပွောခငျြတာလေးတဈခုကတော့ ဖြားနာနတေဲ့ ကလေးငယျနုနုနယျနယျကို တငျပါးဆေးထိုးပွီးအဖြားကအြောငျပွုလုပျခွငျးကိုရှောငျကဉျြဖို့ပါပဲ။ ကလေးသညျလူကွီးနဲ့ခန်ဓာကိုယျဖှဲ့စညျးပုံအနညျးငယျကှာပါတယျ။ ကလေးသညျ လူကွီးအသေးစားမဟုတျပါ။ ကလေးငယျရဲ့တငျပါးဟာ သေးငယျလှနျးတဲ့အတှကျအခနျ့မသငျ့တဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျအောကျပိုငျးအာရုံကွောမကွီးပျေါမှာ ဆေးထိုးမိလိုကျမယျဆိုရငျ ဘဝတဈလြှောကျလုံး အောကျပိုငျးသသှေားခွငျး၊ ခွတေဈဖကျမသနျခွငျးတို့ဖွဈပွီး ဒုက်ခိတဘဝရောကျသှားနိုငျတဲ့အတှကျ မိမိကလေးဖြားတဲ့အခါ တငျပါးကိုဆေးထိုးမခံကွပါနဲ့။ အကွောမထိအောငျထိုးပေးမယျလို့ ဘယျလောကျပွောပွော လုံးဝ ငွငျးဆိုကွပါ။ အသကျ ၁၂အောကျကလေးမြားအတှကျကတော့ ပါးစပျမှတိုကျခွငျးနဲ့ ဂွိုလျတုထညျ့ခွငျးကသာ အန်တရာယျအကငျးဆုံးဖွဈပါတယျလို့ တငျပွရငျး။
အခုဆိုမိုးတွင်းရောက်လို့ ကလေးငယ်တွေအဖျားအနာများလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ကလေးတွေကို ဆေးခန်းပြသူပြ၊ အိမ်မှာပဲကုသူကုနဲ့ ပါရာစီတမောကိုရွေးချယ်တိုက်ကြတဲ့သူတွေကအများဆုံးပါပဲ။ ပါရာစီတမောကို ပါးစပ်ကနေ အရည်အခဲနဲ့တိုက်ကြတဲ့အပြင် ကလေးရဲ့စအိုဝမှတဆင့် ဂြိုလ်တုတောင့်ထည့်ပြီးအဖျားသက်သာအောင်လည်း လုပ်ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပါးစပ်မှတိုက်ကျွေးခြင်းနဲ့ စအိုဝမှဂြိုလ်တုထည့်ခြင်း ဘယ်အရာကပိုကောင်းသလဲ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြရအောင်နော်။
လူအများစုထင်ထားကြမှာကတော့ စအိုမှ ပါရာစီတမောဂြိုလ်တုတောင့်ထည့်ခြင်းဟာ ပါးစပ်မှတိုက်ခြင်းထက်ပိုစွမ်းတယ်၊ အဖျားမြန်မြန်ကျတယ်လို့မှတ်ယူနေကြပါတယ်။ ဒါဟာ အမှန်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ကို အစ္စရေးနိုင်ငံ ဟယ်မတ်ဆေးပညာဌာနမှ ဒေါက်တာဂိုးစတိန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က သုတေသနပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါ ပါးစပ်မှ ပါရာစီတမောတိုက်ကျွေးခြင်းနဲ့ စအိုမှပါရာဂြိုလ်တုတောင့်ထည့်ခြင်းဟာ အဖျားကျစေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိရော၊ အဖျားကျချိန်ရောမှာ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အဖြေထွက်ရှိလာပါတယ်။
ဒါဆိုဂြိုလ်တုထည့်တာဟာ ပါးစပ်မှတိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလား? ဘာတွေပိုကောင်းလဲ။ ဘာတွေဆိုးကျိုးရှိမလဲ?
ပါရာဂြိုလ်တုတောင့်ကို ကလေးများဆေးတိုက်ရခက်ခဲတဲ့အခါမှာ ဆေးအချိန်အဆမမှန်ခြင်းဖြစ်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရမ်းအန်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေပါးစပ်ကနေဆေးတိုက်လို့မဝင်တဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ကတော့ ပါးစပ်ကတိုက်ခြင်းထက် ကလေးငယ်များခံရနည်းနည်းခက်ပါမယ်။ ရုန်းကန်ငိုယိုနေနိုင်ပါတယ်။ အဖျားကျဆင်းစေနိုင်ခြင်းအစွမ်းက အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက် ကလေးငယ်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အဆင်ပြေရာလမ်းကြောင်းကနေသာ ပါရာစီတမောကိုပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဖြည့်စွက်ပြီးပြောချင်တာလေးတစ်ခုကတော့ ဖျားနာနေတဲ့ ကလေးငယ်နုနုနယ်နယ်ကို တင်ပါးဆေးထိုးပြီးအဖျားကျအောင်ပြုလုပ်ခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့ပါပဲ။ ကလေးသည်လူကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံအနည်းငယ်ကွာပါတယ်။ ကလေးသည် လူကြီးအသေးစားမဟုတ်ပါ။ ကလေးငယ်ရဲ့တင်ပါးဟာ သေးငယ်လွန်းတဲ့အတွက်အခန့်မသင့်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းအာရုံကြောမကြီးပေါ်မှာ ဆေးထိုးမိလိုက်မယ်ဆိုရင် ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အောက်ပိုင်းသေသွားခြင်း၊ ခြေတစ်ဖက်မသန်ခြင်းတို့ဖြစ်ပြီး ဒုက္ခိတဘဝရောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက် မိမိကလေးဖျားတဲ့အခါ တင်ပါးကိုဆေးထိုးမခံကြပါနဲ့။ အကြောမထိအောင်ထိုးပေးမယ်လို့ ဘယ်လောက်ပြောပြော လုံးဝ ငြင်းဆိုကြပါ။ အသက် ၁၂အောက်ကလေးများအတွက်ကတော့ ပါးစပ်မှတိုက်ခြင်းနဲ့ ဂြိုလ်တုထည့်ခြင်းကသာ အန္တရာယ်အကင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ တင်ပြရင်း။